AKHRISO: Xasan Sheekh iyo Sheekh Sheriif qoraallo isku mid ah kasoo saaray doorashadii Hirshabeelle | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda AKHRISO: Xasan Sheekh iyo Sheekh Sheriif qoraallo isku mid ah kasoo saaray...
AKHRISO: Xasan Sheekh iyo Sheekh Sheriif qoraallo isku mid ah kasoo saaray doorashadii Hirshabeelle
Madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud & Sheriif Sheekh Axmed ayaa si isku mida usoo dhoweeyay doorashadii maamulka Hirshabeelle ee maanta lagu doortay Madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qoraal uu soo saaray ku yiri: “Hambalyo madaxweynaha la doortay ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen (Guudlaawe) iyo Madaxweyne ku xigeenka Yuusuf Axmed Hagar (Dabageed). Waxaan bogaadinayaa dadaalka ay dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshadu ku bixiyeen dhismaha maamulka”.
Dhinaca kale qoraal kasoo baxay Xisbiga Himilo Qaran ee uu hoggaamiyo Madaxweynihii hore Sharif Sheekh Axmed ayaa u qornaa sidatan: “Xisbiga Himilo Qaran wuxuu bogaadinayaa dadaalka lagu bixiyay dhismaha maamulka Hirshabelle oo uu ugu horreeyaan safarradi nabadaynta ahaa ee uu Guddoomiyaha Madasha Xisbiyada Qaran ahna Madaxweynihi hore ee Dalka Mudane Shariif Sheekh Axmed ugu noqnoqday Magaalo Madaxda Maamulkaas ee Jowhar”.
Madaxda soo dhoweysay doorashada maamulka cusub ee Hirshabeelle waxa ka mida Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiaziiz Lafta-Gareyn iyo madax kale.